Vaovao - Saron-tava, mahatakatra izany amin'ny alàlan'ny fenitra
Amin'izao fotoana izao dia nanomboka ny ady amin'ny pnemonia ateraky ny virus coronavirus. Amin'ny maha "laharana voalohany amin'ny fiarovana" ho fiarovana ny fahadiovan'ny tena manokana dia zava-dehibe tokoa ny fanaovana sarontava izay mifanaraka amin'ny fenitry ny fisorohana ny valanaretina. Manomboka amin'ny N95 sy KN95 ka hatrany amin'ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana, ny olon-tsotra dia mety manana teboka jamba amin'ny safidin'ny sarontava. Eto izahay dia mamintina ireo teboka fahalalana ao amin'ny saha mahazatra mba hanampiana anao hahatakatra ny hevitry ny sarontava. Inona avy ireo fenitry ny sarontava?
Amin'izao fotoana izao, ny fenitra lehibe ananan'ny fireneko amin'ny sarontava dia misy ny GB 2626-2019 "Respiratory Protection Self-priming Filtered Particle Respirators", GB 19083-2010 "Requirements teknika ho an'ny saron-tava fiarovana ara-pitsaboana", YY 0469-2011 "Saron-tava fandidiana fitsaboana", GB / T 32610-2016 "Famaritana ara-teknika ho an'ny saron-tava isan'andro isan'andro", sns., Manarona ny fiarovana ny mpiasa, ny fiarovana ara-pitsaboana, ny fiarovana sivily ary ny sehatra hafa. GB 2626-2019 ″ Fiarovana amin'ny taovam-pisefoana Respiratory Anti-Particulate Respirator "navoakan'ny State State Supervision Supervision and the National Standardisation Administration tamin'ny 2019-12-31. Fepetra takiana izy io ary hampiharina amin'ny 2020-07-01. Ireo zavatra fiarovana voalazan'ny fenitra dia ahitana ny karazan-java-bitika rehetra, ao anatin'izany ny vovoka, setroka, zavona ary zavamiaina bitika. Izy io koa dia mamaritra ny famokarana sy ny pitsopitsony momba ny fitaovam-piarovana miaro ny taovam-pisefoana, ary ny fitaovana, ny firafitra, ny bika aman'endriny, ny fahombiazany ary ny fahaizan'ny filtration. (Tahan'ny fanoherana ny vovoka), fanoherana ny fifohana rivotra, fomba fitsapana, famantarana ny vokatra, fonosana, sns.
GB 19083-2010 "Fepetra takiana momba ny saron-tava fiarovana amin'ny fiarovana" dia navoakan'ny General General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine ary ny National Standardization Administration tamin'ny 2010-09-02 ary napetraka tamin'ny 2011-08-01. Ity fenitra ity dia mamaritra ny fepetra ara-teknika, ny fomba fitsapana, ny famantarana ary ny torolàlana momba ny fampiasana sarontava miaro ny fitsaboana, ary koa ny fonosana, ny fitaterana ary ny fitehirizana. Izy io dia mety amin'ny fampiasana amin'ny tontolon'ny asa fitsaboana mba hanivanana ireo poti-drivotra sy hanakanana ny vongan-drano, ra, tsiranoka amin'ny vatana, tsiambaratelo, sns. 4.10 ny fenitra no atoro anao, ny sisa tsy maintsy atao.
YY 0469-2011 "Sarontava fandidiana ara-pitsaboana" dia navoakan'ny State of Drug and Food Administration tamin'ny 2011-12-31. Izy io dia fenitra ho an'ny indostrian'ny fanafody ary hampiharina amin'ny 2013-06-01. Ity fenitra ity dia mamaritra ny fepetra ara-teknika, ny fomba fitsapana, ny marika ary ny torolàlana amin'ny fampiasana, famonosana, fitaterana ary fitahirizana sarontava fandidiana ara-pitsaboana. Ny fenitra dia mamaritra fa ny fahombiazan'ny sivana amin'ny sivana dia tsy tokony ho latsaky ny 95%.
GB / T 32610-2016 "Famaritana ara-teknika ho an'ny saron-tava isan'andro isan'andro" dia navoakan'ny General General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine ary ny National Standardization Administration tamin'ny 2016-04-25. Io no fenitra nasionaly voalohany ho an'ny fireneko amin'ny sarontava fiarovana sivily, amin'ny 2016-11 -Fampiharana amin'ny 01. Ny fenitra dia mitaky ny takiana amin'ny akora maska, ny fepetra takiana amin'ny rafitra, ny takiana amin'ny famantarana ny marika, ny takiana amin'ny endrika, sns. fahombiazana, famantarana fanoherana maharitra sy aingam-panahy ary mari-pamantarana adhesion. Ny fenitra dia mitaky fa ny sarontava dia tokony ho afaka miaro am-bava sy mafy ny vava sy ny orona, ary tsy tokony hisy zorony maranitra sy sisiny azo kitihina. Izy io dia manana fitsipika amin'ny antsipiriany momba ny anton-javatra mety hanimba ny vatan'olombelona, ​​toy ny formaldehyde, ny loko ary ny zavamiaina bitika, hahazoana antoka fa afaka mitafy azy ireo ny besinimaro. Fiarovana rehefa manao sarontava miaro.
Inona avy ireo sarontava iraisana?
Ankehitriny ny sarontava be mpiresaka matetika dia misy KN95, N95, sarontava fandidiana ara-pitsaboana sns.
Ny voalohany dia saron-tava KN95. Araka ny fanasokajiana ny fenitra nasionaly GB2626-2019 "Fiarovana amin'ny ain'ny tena (peripheral protection self-priming Filtered Particle Respirator"), ny sarontava dia mizara ho KN sy KP araka ny haavon'ny fahombiazan'ny singa sivana. Ny karazana KP dia mety amin'ny fanivanana ireo poti-menaka, ary ny karazana KN dia mety amin'ny fanivanana ireo sombin-tsolika tsy misy menaka. Anisan'izany, raha ny mason-tava KN95 dia hita miaraka amin'ny sombin-tsiranoka klôroôida, ny fahombiazan'ny filtration dia tokony ho lehibe kokoa na mitovy amin'ny 95%, izany hoe, ny fahombiazan'ny filtration an'ny poti-tsy misy menaka ambonin'ny 0.075 microns (savaivony mediana) dia lehibe kokoa na mitovy hatramin'ny 95%.
Ny sarontava 95 dia iray amin'ireo sarontava miaro sivily sivy voamarin'ny NIOSH (Ivon-toerana Nasionalin'ny fiarovana sy ny fahasalamana amin'ny asa). "N" dia midika hoe tsy mahatohitra menaka. "95 ″ dia midika fa rehefa tratry ny tsiranoka fanandramana manokana, ny tsiranoka ao anaty sarontava dia ambany noho ny 95% ambany noho ny fatran'ny sombiny ivelan'ny sarontava.
Avy eo misy sarontava fandidiana ara-pitsaboana. Araka ny famaritana ny YY 0469-2019 "Maskery amin'ny fandidiana ara-pahasalamana", ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana dia "anaovan'ny mpiasan'ny fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny tontolo iainana manafika mba hanomezana fiarovana ireo marary manaraka fitsaboana sy ireo mpiasa mpitsabo manao hetsika manafika, misoroka ny ra, sarontava amin'ny fandidiana. naparitaky ny tsiranoka amin'ny rano sy ny splashes dia saron-tava fanaon'ny mpiasan'ny fitsaboana any am-piasana. ” Ity karazana sarontava ity dia ampiasaina amin'ny tontolon'ny fitsaboana toy ny tobim-pitsaboana, laboratoara ary efitrano fandidiana, ary mizara ho sosona tsy misy rano, sosona sivana ary sosona fampiononana avy any ivelany ka hatrany anatiny.
Misafidiana satroka amin'ny siansa.
Nilaza ny manam-pahaizana fa ankoatry ny fanomezana fiarovana mahomby, ny fanaovana sarontava dia tsy maintsy dinihina ihany koa ny fampiononan'ny mpitafy ary tsy hitondra vokadratsiny toy ny loza voajanahary. Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny maha-avo kokoa ny fisaronan'ny saron-tava, ny fiatraikany lehibe kokoa amin'ny fampisehoana fampiononana. Rehefa misaron-tava ny olona ary mifoka, dia manana fanoherana azo antoka ny fikorianan'ny rivotra ilay sarontava. Rehefa lehibe loatra ny fanoherana ny fofonaina dia hahatsapa ho fanina ny olona sasany, tery ny tratra ary tsy mahazo aina hafa.
Ny olona samy hafa dia manana indostria sy fizika samihafa, noho izany dia manana fepetra takiana amin'ny famehezana, fiarovana, fampiononana ary fampifanarahana sarontava. Ny vahoaka manokana sasany, toy ny ankizy, ny be antitra, ary ireo olona manana aretin'ny taovam-pisefoana sy aretim-po, dia tokony hisafidy tsara ny karazana sarontava. Amin'ny tanjona hiantohana ny filaminana, sorohy ny lozam-pifamoivoizana toy ny hypoxia sy ny fanina rehefa mitafy azy ireo mandritra ny fotoana maharitra.
Ary farany, ampahatsiahiviko ny rehetra fa na inona na inona karazana saron-tava, dia tsy maintsy alaminao tsara aorian'ny fampiasana azy io, mba tsy ho lasa loharanom-aretina vaovao ianao. Manomàna maska ​​vitsivitsy hafa ary mazotoa soloina ara-potoana mba hananganana ny laharana voalohany amin'ny fiarovana ny fiarovana ara-pahasalamana. Mirary fahasalamana ho anao rehetra!
Fotoana fandefasana: Jan-01-2021
Swab vita amin'ny landihazo voadio, Saron-tava Antiviral, Saron-tava miaina, Saron-tava medikaly fanary azo ampiasaina, Pad mpitsabo mpanampy, Landihazo fitsaboana,